Yusuf Garaad: Matabaan ilaa Berbera - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Siddeedaad
Matabaan ilaa Berbera - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Siddeedaad
Beled Weyne ayaan goor subax ah ka baxnay. Waxaan tagnay barta ciidanku fadhiyo ee lagu baaro baabuurta ee loo yaqaan Centoquindice oo ah 115 oo af Talyaani ah, waxaa loola jeedaa in ay 115 km u jirto Buulo Burte. Halkaas ayaan bidix u weecannay oo ku dhacnay waddada u socota Jihada feer feer oo ah soohdinta Ethiopia oo markaas noo jirta qiyaastii afartameeyo km.
Annagu jihadeennii ayaan isaga soconnay. Waddadii burbursanayd waxay ku dhammaatay Jawiil. Tog weyn ayaa ag mara. Waxaa keliya oo uu biyo leeyahay xilliga roobku ka da'o degaankaas ama buuraleyda Ethiopia ee uu ka soo billowday. Waxaa dul saaran kaabad aad u dheer.
Howshii aan wadnay ayaan ka warbixinnay. Si wanaagsan ayuuna noo soo dhoweeyay Guddoomiyuhu iyo weliba mas'uuliyiintii kale ee halkaa joogay.
Waxay ahayd magaalo aad u dad badan oo cammiran marka la yiraahdo dadka dhex socda. Laakiin marka aan barbardhigo ra'yiga mala awaalka ah ee awal madaxeyga ku jiray, magaalnimo badani ka muuqan Burco. Waa marka la eego xagga dhismayaasha, gawaarida iyo lebbiska dadka magaalada. Go'a garabka saaran, ulaha iyo budadka, dhawaaqa ka baxaya magaalada intuba waxay igu noqdeen wax aanan ka fileyn.
Beatrix oo dul taagan Buurta Shiikh